Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyo Baahsan oo Ogadenia Kadhacay + Magacyo.
Tacadiyo Baahsan oo Ogadenia Kadhacay + Magacyo.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo baahsan oo ay ciidanka gumaysigu ugaysteen
dadka shacabka ah ee udhaqan guud ahaan wadanka Ogadenia, warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in dhibaatooyin kala gadisan loo gaystay shacabka Somalida Ogadenya.
Warkan ayaa sheegaya in markay taariikhdu ahayd 27/6/16 Tuulada Caleen oo Dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay katirsan ay ciidanka nacabka ah ee gumaysigu ku dileen Allaha unaxariistee nin shacab ah oo lagu magacaabo Xuseen Aadan rooble Foolay oo 75 jir ah.
Waxa kaloo uu warku intaas ku darayaa in 28/6/16 Dagmada Gaashaamo ee Gobolka Jarar ay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen Odayaal kor udhaafaya 75 oday oo ay kujiraan kuwo deegaanka caan ka ah. Sidoo kale Tuulada Goomaar oo Dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay ka tirsan waxay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen dad shacab ah oo 60-qof kor udhaafaya waxaana magacyadooda helay kuwan soo socda:-
1 kaad axmad sh ibraahim
2 axmad sheekh ibraahim
3 ardo maxamad ow macalim
4 aamina dheer axmad saahid.
Isla taariikhdan 28/6/16 meesha lagu magacaabo Xidhgalool oo Dagmada Birqod katirsan waxay ciidanka wayaanuhu ka soo qabqabteen dad aad ubadan waxaana magiciisa aan helay nin lagu magacaabo Cabdi Cabdi. Waxaa kaloo Dagmada Birqod ee Gobolka Jarar ay ciidanka cadawgu xidhay iyo jidh dil ba’an isugu dareen dad shacab ah oo farabadan waxaana kamid ah:-
1 aadan kilaas oo gacmaha laga jabiyay
2 cibaado cumar oo iyana gacmaha laga jabiyay
3 xassan geelle oo lug iyo gacan laga jabiyay
4 maxamuud deeq oo isna lugaha iyo gacmaha lga jabiyay
5 maxamad cabdi gaanbiye oo lamid ah
6 xuseen rashiid cabdulaahi oo isna lugaha laga jabiyay.
Dhamaan dadkan iyo kuwo kaloo badan ayaa loogaystay dhaawacyo kala duwan mana jiro wax daryeel caafimaad ah oo ay dadkan heleen. Sida aan xogtan kuhelay dadkan shacabka ah ayaa loogu aaaray khasaare ciidanka gumaysiga kasoo gaadhay gaadhi ay Ciidanka JWXO ku gubeen duleedka Birqod kaasoo ay ku halaagsameen askar aad ubadan.